Cute Calendar PRO 0.6.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 0.6.0 လြန္ခဲ့ေသာ3ပတ္က
Application မ်ား အစီအစဥ္မ်ား Cute Calendar PRO
Cute Calendar PRO ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဒါကြောင့်အမျိုးသားပွေ့ဖက်နေ့ရဲ့စဉျးစားကွညျ့နှငျ့သငျကလက်လွတ်! ဒီကြော်ငြာအခမဲ့ app ကိုအတူသင်တို့သည်ဤဖက်ဒရယ်နှင့်ရယ်စရာအားလပ်ရက်မဆိုလက်လွတ်ဘယ်တော့မှမယ်! သငျသညျအလုပျမှာကိုယ့်ကိုကိုယ်အားလုံးတစ်ဦးတည်းကိုရှာဖွေဘယ်တော့မှဒါ၏သင်တန်းအားလုံးဖက်ဒရယ်အားလပ်ရက်အပြင်အရာရှိတဦးကအသိအမြင်ရက်အထိမ်းအမှတ်ရက်ပေါင်းအကြောင်းကိုအဖြစ်ဘာသာရေးပွဲတော်များ, ရာသီ, လအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရှိကွောငျးကနေ ... app ကို၏အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများမှာ အဆင့်, ကျောင်းအားလပ်ရက်, ရာသီ, တံတားရက်ပေါင်းနှင့်မိုဃ်းလင်းချွေတာရေးအချိန်အစပိုင်း။ ဒါ့အပြင်အရူးပျော်စရာအားလပ်ရက်နှင့်အရသာအစားအစာအားလပ်ရက်၏ဝန်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခံရဖို့စောင့်ဆိုင်း။
app ကိုစတင်ပြီးနောက်ထိုနေ့၏အားလုံးအားလပ်ရက်နှင့်ဖြစ်ရပ်များကိုသင်သေသပ်စွာတစ်ဦးစာရင်းထဲတွင်စီစဉ်ပေးဖို့တင်ပြကြပါတယ်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးနှစ်သက်ဖွယ်ရုပ်ပုံစာရင်းထဲကအားလပ်ရက်များထဲမှသင့်လျော်လျက်ရှိ၏။ ဒီလိုလားသူဗားရှင်းအတွင်းမှာပဲသင်သည်လည်း bandwith ကိုကယ်တင်ဓါတ်ပုံတွေကိုပိတ်ထားလို့ရပါတယ်။ သငျသညျကိုပြန်ခုန်များနှင့် forward ပြက္ခဒိန်တွင်သို့မဟုတ်သင်ဆန္ဒရှိမည်သည့်ရက်စွဲကိုတိုက်ရိုက်ခုန်ဖို့ datepicker ကိုသုံးနိုင်သည်နိုင်ပါတယ်ဥပမာ - သင့်ရဲ့မွေးနေ့အဘို့နှင့်တူ။ သငျသညျအခြို့အဖြစ်အပျက်အကြောင်းကိုပိုမိုထွက်ရှာတွေ့လိုပါလျှင်အချို့ကိုသင်အကျဉ်းသတင်းအချက်အလက်မှသွားလာလို့ရပါတယ်။ သငျသညျတစ်ခုတည်းဖြစ်ရပ်များဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိုမိုသောအချက်အလက်များကိုရှာဖွေ, မိတ်ဆွေများနှင့်အတူမျှဝေ, အလွန်အမျိုးအစား browse သို့မဟုတ်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြက္ခဒိန်ဖြစ်ရပ်လွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်။
နောက်ထပ်သီးသန့်လိုလားသူဗားရှင်း feature ကိုလက်ရှိရက်စွဲနှင့်တစ်ဦးကိုးကားသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီသည်နေ့ရက်သည်ဟု၏နာမတော်ကိုရက်ပေါင်းဖြစ်ကြသည်။ အပိုဆောင်းအချက်အလက်များကို setting များကို အသုံးပြု. သင်တို့အဘို့အပေးခံရကြလိမ့်မည်သည့်ဆုံးဖြတ်ပါ။ သငျသညျရုပ်ရှင်ရုံထုတ်, ဖျော်ဖြေပွဲ & ပွဲတော်များ, ဝိုင်း & ကွန်ဂရက်အဖြစ် funfairs ကနေရွေးချယ်နိုင်သည်။ အခမဲ့ app ကို အသုံးပြု. အစား 300 ရက်ပေါင်းများ - ကိုသာလိုလားသူဗားရှင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုပြီးခဲ့သည့် 500 ရက် access ကိုရလာမယ့် 500 ရက်ပေါင်းရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကြှနျုပျတို့၏ website www.cute-calendar.com အပေါ်ပေးအပ်သည်။
• app ကိုစတင်ပြီးနောက်စာရင်းထဲတွင်လက်ရှိအဖြစ်အပျက်များနှင့်အားလပ်ရက်များပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
•နေ့စဉ်ပြက္ခဒိန်: ရက်စွဲ, အစ္စလာမ့်ခြင်းနှင့်ဂျူးပြက္ခဒိန်, နေထွက် / နေဝင်နဲ့ရက်စွဲ၏ရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာ။
•မည်သည့်ဖြစ်ရပ် (တိုတောင်းသောဖော်ပြချက်) အကြောင်းကိုအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကို။
•အ datepicker နှင့်အတူအချို့သောရက်စွဲများ၏ရွေးချယ်ရေး။
•ဥပမာ, ဖွငျ့အားလပ်ရက်၏မျှဝေခြင်း WhatsApp ကို, Facebook, Snapchat, Twitter Threema, Bluetooth Google+ မှာ, SMS သို့မဟုတ် e-mail, ။
•အမျိုးအစား Overview ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအခြို့သောအမျိုးအစားလာမည့်အားလပ်ရက်ပြသပါ။
•ရုပ်ရှင်ရုံထုတ်, ဖျော်ဖြေပွဲ & ပွဲတော်များ, ဝိုင်း & ကွန်ဂရက်အဖြစ် funfairs ရွေးချယ်ရာတွင်အားဖြင့် setting တွင်ထိုအဖြစ်အပျက်မျက်နှာပြင်၏တစ်ဦးချင်းစီ။
•လတ်တလောနေ့အဘို့ Push ကို-အကြောင်းကြားစာများ။
https://play.google.com/store/apps/details?id=net ။ cutecalendar.app
Cute Calendar PRO အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Cute Calendar PRO အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Cute Calendar PRO အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Cute Calendar PRO အား အခ်က္ျပပါ
ramona-zimmermann စတိုး 3.19k 640.61k
Cute Calendar PRO ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Cute Calendar PRO အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 0.6.0
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.cute-calendar.com/app-privacy.html
App Name: Cute Calendar PRO
Release date: 2019-08-30 09:20:50
လက်မှတ် SHA1: 41:FF:A6:BF:69:1D:E1:A7:BC:35:BB:8E:FD:2B:02:1C:BB:9E:D2:F0
အဖွဲ့အစည်း (O): YSV
နယ်မြေ (L): Wiesbaden
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Hesse
Cute Calendar PRO APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ